Shiinaha Terpene pinene dabka warshad wax xabagta iyo alaab-qeybiyeyaasha | DESAY
Dareeraha dareeraha dareeraha ah, oo sidoo kale loo yaqaan polyterpene ama geedka pinene, ayaa badanaa ah taxaneyaal polymer toosan laga bilaabo dareeraha illaa adag oo loo diyaariyey iskudhiska polymerization ee a-pinene iyo b-pinene oo ka yimaada turpentine hoosta Lewis catalysis. iyo b-pinene oo leh monomers kale (sida styrene, phenol, phenol iyo formaldehyde) ayaa loo isticmaalay in lagu soo saaro terpenes - resins ku saleysan terpene sida styrene, terpenol iyo terpene phenolic.
Cusbi dareeraha terpene waa huruud khafiif ah oo hufan.With shucaaca iska caabin ah, iska caabin ah gabowga, iska caabin ah si loo milo acid, milo alkali, anti-crystallization, ningax koronto xoog leh iyo guryaha kale. , laakiin aan lagu milmin biyaha, formic acid iyo ethanol.
Cusbi Terpene pinene
★ Sifooyinka waxqabadka alaabta
1. Nafaqo bilow wanaagsan ah;
2, iska caabin wanaagsan oo qabow;
3, miisaanka molikalku hooseeyo, oo si fudud loo emulsify;
4. Iswaafajin wanaagsan oo lala yeesho SIS, SBS, EVA iyo caag dabiici ah.
★ Waxyaalaha Jirka iyo kiimikada
1. Dheecaan hufan oo huruud ah oo huruud ah;
2, waxaa jira ur yar oo udgoon terpene ah;
3, iska caabinta shucaaca, anti-crystallization, xoogaa xasilloon oksijiin, kuleylka, iftiinka, iska caabin xoog leh oo ku saabsan asiidhyada, alkalis, dahaadhka korantada;
4, oo si fudud loogu milmi karo benzene, toluene, turpentine, petrol, iwm, oo aan lagu milmi karin biyaha, methanol iyo ethanol.
★ Adeegsiga ugu weyn
1, SIS, SBS dhalaal kulul;
2. Cajalad warqad difaac ah oo biyo ku saleysan;
3. Duubista cajaladda warqadda ah.
Dheecaanka dareeraha dareeraha ahi waa wax sifiican loo adkeeyo. Waxqabadkeeda tafaariiqda ayaa ka sarreeya rosin rosin waxyaabaha la beddelay iyo saliidaha saliida.
Sidoo kale waa wax ka beddelka qalabka dhalaalaya kululaynta. Waxay leedahay noocyo badan oo codsiyo ah. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa caag, dhejisyo, iyo xabag cadaadis xasaasi ah. Cajalado koollo ah, daahan dhalaal kulul, rinji,
gashannada horumarsan, baakadaha, saliidda ka-hortagga miridhku iyo warshadaha kale ayaa si ballaaran loo adeegsadaa.
Sifooyinka Waxqabadka Badeecada
3, miisaanka molikalku hooseeyo, emulsification fudud;
4. Waxaa lagu kala diri karaa SIS, SBS, EVA iyo caag dabiici ah.
Sifooyinka jirka iyo kiimikada ee alaabada
1, dareere hufan oo huruud ah oo huruud ah;
2, waxaa jira caraf udgoon yar oo terpene ah;
3, iska caabinta shucaaca, anti-crystallization, xoogaa deggan in oxygen, kulaylka, iftiinka, ningax xoog leh si aysiidh, alkali, korontada;
4, ku milma benzene, toluene, turpentine, petrol, aan lagu milmin biyaha, methanol iyo ethanol.
Ujeedada ugu weyn
1, SIS, SBS kuleylka kuleylka;
2, cajalad warqad difaac ah oo biyo ku saleysan;
3. Meiwen cajalad warqad difaac ah, iwm.
Dareeraha dareeraha ah ee dareeraha ahi waa nooc ka mid ah tafaariiqda aadka u fiican, waxqabadka tafaariiqda ayaa ka wanaagsan kan rosin rosin ee wax laga beddelay iyo cusbada batroolka, iwm. , Dahaarka sare ee dhalaalida kululeeyaha, rinjiga, khadka, baakadaha, saliida miridhku cadeeyo, xanjada iyo warshadaha kale ee aadka loo isticmaalo.
Hore: Koolada laba qaybood ah
Xiga: Universal Glue / Super SBS All-purpose General Adhesive Glue
Midab warqad daabacan midab daabacan gaari dahaaray ...
Budada Buluugga ah ee Buluuga ah ee Bilaashka ah ee "Non Nitrile" ...